VIDEO-Isimadii Ugu Sareeyey SSC oo Garoowe War Culus Ka Shaaciyey Kuna Dhawaaqay in Loo Diyaar Garoobo.
Puntlandnews.net (Garoowe)-Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka aloosnaa gobolka Sool xiisad u dhexaysa Puntland iyo Somaliland oo marar badan ku dagaalamay deegaanka Tukaraq, waxaana jirey dhacdooyin kale oo sanadkaan ka dhacay gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn.
Ka sokow dagaalada u dhexeeya Puntland iyo Somaliland gobolka Sool waxaa ka dhacay dagaalo u dhexeeyey beelo walaala ah, waxaana sidoo kale gobolka Sanaag ku dagaalamay beelo ka soo jeeda deegaamada Somaliland halka magaalada Buuhoodle uu ka dhacay qarax khasaare sababay.
Boqor Cabdullaahi Axmed oo katirsan isimada ugu caansan gobolada SSC gaar ahaan gobolka Cayn oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa ka hadlay xaaladda goboladaasi isagoona digniin culus diray.
Boqorka ayaa ka hadlay qarixii khasaaraha nafeed sababay ee ka dhacay magaalada Buuhoodle, saamaynta ka dhalatay iyo natiijada baaritaankiisii ka soo baxay, wuxuuna sidoo kale ka hadlay dagaalka Dhummay iyo arrimaha Somaliland waddo.
DEG DEG+AKHRISO-Qodobo Ka Soo Baxay Gudigii Dhex Dhexaadinta Bah-ararsame iyo Qayaad.